BullyingCanada - inye ụmụaka ndị a na-emegbu emegbu ọdịnihu ka mma
na-eguzo n'akụkụ iji nyere aka nweta Help Nweta Enyemaka Ugbu a nkwado BullyingCanada Sonye Ị nwere ike inye aka BullyingCanada na-adabere na ndị na-emesapụ aka
otu ihe ngwọta dị mma maka iji ike emegbu mmadụ
Anyị nọ ebe a ịkwado gị nzọụkwụ ọ bụla.
BullyingCanada bụ naanị otu mba na-edozi ọnọdụ mmegbu maka ndị ntorobịa Canada site n'ịkwado nzikọrịta ozi n'etiti ụmụaka a na-emegbu ha, ndị na-emekpa ha ahụ, nne na nna, ndị nkuzi, bọọdụ ụlọ akwụkwọ, ọrụ mmekọrịta, na, mgbe ọ dị mkpa, ndị uwe ojii.
Nye ihe n'ụba
Sonyere anyị. Chekwaa ndụ.
Ndị ọrụ afọ ofufo na ndị nyere onyinye dị ka gị na-akwado nkwado anyị dị oke egwu.
Kwa ụbọchị, anyị na-enweta ihe karịrị otu puku mkpu maka enyemaka. Enyemaka mmesapụ aka gị dị oke mkpa iji gboo mkpa ndị ntorobịa obodo anyị a na-emegbu emegbu.
Rob Benn-Frenette, ONB , Onye hiwere
Ọ dịghị nwatakịrị a ga-amanye ịhapụ ụlọ akwụkwọ n'ihi na ọ dịghị mma maka ha - nke ahụ bụ otu n'ime ọtụtụ ihe mere anyị ji malite. BullyingCanada.
Katie Thompson (Neu) , Onye hiwere
Nye ụmụaka ndị a na-akpagbu ọdịnihu ka mma.
Jikọọ BullyingCanada n'inye ihe ndị dị mkpa, na-azọpụta ndụ na enyemaka n'ebe ndị ntorobịa obodo ahụ na-adịghị ike. Enwere ọtụtụ nhọrọ iji tinye aka-site na ịbụ otu n'ime ndị na-enye onyinye na-emesapụ aka ruo n'iwepụta onwe maka ahịrị nkwado ma ọ bụ inye aka n'azụ ụlọ ọrụ. Kpọtụrụ anyị taa ka ịmatakwu.
Bụrụ usoro ndụ
Anyị niile nọ na nke a—ọtụtụ puku ndị ntorobịa dabere na anyị.
Biko nye onyinye ugbu a, n'ihi na oge ọ bụla bara uru!
Ka a na-emegbu nwatakịrị ogologo oge, otú ahụ ka ọ ga-esiwanye ike ịmalite ime ahụ, mmetụta uche, na nke uche nke nwere ike ịdịru ogologo ndụ. Iji ike emegbu mmadụ nwere ike imebi ntụkwasị obi, na-ahapụ ụmụaka ka a napụrụ ya na enweghị ntụkwasị obi, na-enwe afọ mgbu, ụjọ ụjọ, na nro. Ha enweghị ike itinye uche n'ihe n'ụlọ akwụkwọ, na-ebute akara ule dara ogbenye nke nwere ike belata ohere ha n'ọdịnihu. Mgbe mmegbu na-adịghị akwụsị akwụsị, ịda mbà n'obi na nchekasị nwere ike iduga ụmụaka igbu onwe ha.
Ọ na-achọ nnukwu obi ike maka ụmụaka ịbịakwute anyị maka enyemaka. Onyinye gị ga-eme ka a zaa mkpu enyemaka ọ bụla, ụbọchị ọ bụla… oge ọ bụla. Onyinye gị na-enyere anyị aka ịrapagidesi ike site na ụmụaka n'ihi na ọ bụrụhaala na ọ na-ewe ka anyị kwụsị mmegbu na-enye ha a magburu onwe ọdịnihu!
Kedu ihe kacha akọwa ajụjụ gị? (*)Abụ m onye ntorobịa ma achọrọ m enyemaka maka imeri mmegbu.Achọrọ m enyemaka na onyinye onyinye ma ọ bụ ụtụ isi.Ọ ga-amasị m ịgwa mmadụ gbasara inye ihe nketa ma ọ bụ nhazi ala.Ọ ga-amasị m inye onwe m afọ ofufo BullyingCanada.Enwere m ajụjụ ma ọ bụ ikwu okwu n'ozuzu.Abụ m onye otu mgbasa ozi na achọrọ m ịkpọtụrụ.Achọkwaghị m ịbanye na listi nzipu ozi gị.
Ozi dị mkpa gbasara ọrịa COVID-19 na-aga n'ihu
N'ihi nchegbu ahụike zuru ụwa ọnụ ugbu a yana oke akụrụngwa, BullyingCanada ga na-arụ ọrụ na obere ikike na naanị ọrụ dị mkpa. Nke a pụtara na ọrụ anyị (email, nkata ndụ, nkwado ederede, na ahịrị ekwentị) ga-adị naanị ndị ntorobịa maka ogologo oge ọrịa a. A ga-etinye ndị ọzọ niile n'ahịrị maka nsonye n'oge ọzọ.
Daalụ maka nghọta gị.